Jiilka koowaad ee Apple Watch iyo Taxanaha 1 isku mid ma ahan | Waxaan ka socdaa mac
Jiilka koowaad ee Apple Watch iyo Taxanaha 1 isku mid ma aha
Markii hore shaki ayaa iga galay, taasina waa in dhammaan dadka isticmaala ay haysteen. Maxaa isbadalay? Saacadda cusub waa Apple Watch Series 2, markaa waa maxay dhab ahaan Taxanaha 1? Hagaag, waan kaaga jawaabi doonaa: Waa nooc cusub, haa, sanadkan, oo la cusbooneysiiyay oo aad u cusub. Muxuu hal taxane uga duwan yahay kan kale? Midkee ayaan iibsanayaa iyada oo ku xidhan isticmaalka aan siiyo iyo isticmaalaha ay tahay? Ma mudan tahay in la badbaadiyo € 100 oo la doorto taxanaha 1 ama ka sii fiican ayaan u boodayaa kan labaad?
Maanta waan ka hadli doonaa, waana taas inaan qaatay go'aan muhiim ah. José Alfocea horeyba wuu iiga digay inuu badali doono maskaxdiisa marar badan tan. Wax badan ayaan ka faallooday aniga oo aanan kugula talin Apple Watch Series 2 waxayna umuuqatay mid aad qaali u ah wuxuu ahaa. Waxaan ku dheganaanayaa tan, taasi waa sababta aan ugu fikiray inaan iibsado taxanaha 1 aluminium hadda. Wax badan ayaan ka bartay kala duwanaanshaha iyo faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka u dhexeeya labada nooc. Akhri faahfaahinta saacadda iyo waxyaabaha aan ka qaato tan.
1 Apple Watch Taxanaha 1 ama Taxanaha 2?
2 Maxaad ka heli doontaa Taxanaha 2
3 Isku ekaanshaha macquulka ah, qiimayaasha aan sameyn
Apple Watch Taxanaha 1 ama Taxanaha 2?
Sidaan leeyahay, waxaan arkay maqaallo iyo warar sheegaya in midda cusubi tahay Taxanaha 2 halka kan kalena yahay 2015. Maaha. Waa runtaa qaab ahaan dhammaantood waa isku mid iyo in kabadan ama kayar ay isku aalad yihiin, laakiin ay jiraan wax isbadala. Inta udhaxeysa Apple Watch kii ugu horeeyay iyo taxanaha 1 waxaa jira kala duwanaansho dhowr ah. Mabda 'ahaan waa processor-ka oo keliya, laakiin taasi waxay u tarjumaysaa: Batariya badan, waxqabad fiican, marka lagu daro awood aan waligeed lagu arkin processor-ka cusub ee laba-geesoodka ah. Laakiin waa in kala duwanaanshaha aan ka heli doonno ixtiraamka Taxanaha cusub ee 2 aysan sidoo kale aad u badan. Isticmaalayaal badan oo iibsanaya saacadda ayaa u socon doona midka cusub, kan ka bilaabmaya 439 1, oo ah midka ay ku soo bandhigeen kacaan ahaan, laakiin taxanaha 2 ayaa laga yaabaa in lagu taliyo haddii aannaan adeegsanayn. ee cibaaro. Si aad si cad kuugu hayso. Hoos waxaan ku magacaabi doonaa oo aan si kooban ugu sharxi doonaa waxa Taxanaha 1 uu leeyahay Taxanaha XNUMX ee aanu lahayn.
Maxaad ka heli doontaa Taxanaha 2
Kala duwanaanta weyn iyo buugga tusaalooyinka. Taxanaha 2 ayaa laga heli karaa dhammaan noocyada, laga bilaabo aluminium ilaa Edition illaa birta aan lahayn. Dhinaca kale, Taxanaha 1 waxaa kaliya laga heli doonaa midka aluminium ee leh silsilad silikoon ah. Laakiin haddii aad dooran lahayd moodelkan, dhib kuma lahaan doontid inaad kala doorato mid taxane ah iyo midka kale.
GPS-ka ayaa lagu dhisay processor-ka laba-geesoodka ah. Maaha processor ka fiican Qeybta 2, waa isku mid. Ka dhakhso badan saacadihii ugu horreeyay ee 2015, laakiin labada taxane ee sannadkan waa isku mid. Haddii aad u baahato ama aad rabto GPS-ka, waa inaad ka bilowdaa qaabkan, maadaama Taxanaha 1 uusan lahayn.
Apple Watch-kan ayaa ah mid biyaha hoostooda lagu aasi karo 50 mitir. Taxanaha 1 wuxuu ahaa mid firidhsan, sida iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray. Taas macnaheedu maaha in dammaanaddu ay dabooleyso jabinta biyaha, laakiin way sii jirtaa oo xitaa waxaa jira dad isticmaala oo ku qubeysanaya ama kula maydhanaya Taxanaha 2 haa waad qoyn kartaa cabsi la'aan waxaadna geyn kartaa xeebta, badda ama webiga iyo barkadda adoo nabad qaba.
Shaashad ka ifaysa sidii hore. Ilaa labalaab Taxanaha 1 wuxuu gaaraa ilaa 450 nits, Taxanaha 2 xitaa 1000 nits. Labadooduba wey muuqdaan, xitaa qorraxda, markaa uma qalanto in qiimaha la kordhiyo.
Isku ekaanshaha macquulka ah, qiimayaasha aan sameyn
Taasi waa taas, kuwani waa kala duwanaanshaha Apple Watch. Waxa ugu dambeeya ee kala sooca taxanaha waa qiimaha. Farqiga u dhexeeya waa € 100. Ma mudan tahay in wax badan la bixiyo si loo helo GPS-ka, awoodda lagu quusin karo, ama shaashad iftiimaya? Waxaan u maleynayaa in taasi aysan aheyn kiiskeyga, maxaa yeelay ma aanan isticmaalin taas. Waxaan door bidaa inaan lacag keydsado, anigoo og in qaabkeygu yahay midka silikoonka oo uu kujiro labada taxane. Awooddu waa isku mid sidaa darteedna lagama tegayo gadaal. Qaabka 38mm Taxanaha 1 wuxuu ku kacayaa € 339 iyo nooca 42mm € 369. Waxaan u socdaa midka weyn, sida dadka isticmaala badankood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Jiilka koowaad ee Apple Watch iyo Taxanaha 1 isku mid ma aha
Su'aal… maxay ku kala duwan yihiin Ciyaaraha iyo Taxanaha 2?
Haddii xusuustu si sax ah iigu adeegto, farqiga u dhexeeya Watch Sport (jiilka koowaad) iyo Taxanaha 2 ayaa ah in kan dambe uu isku daro GPS, shaashad dhalaalaysa, iyo cuf cusub oo dheereeya. Waxaan u maleynayaa inaysan jirin kala duwanaansho dheeraad ah, in kastoo aan u maleynayo inaan xasuusto inay ku jirto xoogaa yar oo bateri ah, laakiin ku daritaankan waxaa joojiyay isticmaalka GPS-ka.
Waan ka xumahay, waxaan ula jeeday taxanaha 1. Waa cinwaanka boostada laakiin ma isbarbar dhigin
Xaq, waxaan kugu barbar dhigay Taxanaha 2. Hagaag ma ihi qoraha maqaalka haha. Farqiga u dhexeeya Sportiga (jiilka koowaad maxaa yeelay sidaan oo kale maba sii jiraan), iyo taxanaha Watch 1, ayaa ah in shaashadda ay dhalaalayso oo processor-ku uu ka dhakhso badan yahay. Waxaan u maleynayaa inay kuwani yihiin kala duwanaanshaha kaliya. Waa saacad isku mid ah laakiin xoogaa waa laga fiicnaaday dhinacyadaas.
Taxanaha 7000; kaas oo ka tirsan taxanaha 1 ama taxanaha O. Muxuu ahaa qiimaha cusub ee noocyada taxanaha ah ee 7000? Aad ayaad u mahadsantahay
Xalka dhibaatada rakibaadda macOS Sierra: "xaqiijinta saxeexa mushaharka rakibayaasha ayaan la fulin karin"
Fadhiga Surf ee cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus